အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်ဈေးကွက် အားကောင်းလာရာ ယခုအခါ ဘတ်ဂျက်လိုငွေကိုပင် ထေမိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ငွေတိုက်စာချုပ်များ ပိုမိုရောင်းအားကောင်းလာစေရန် လုပ်ဖို့လိုသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူတို့ကဆိုကြသည်။
Frontier Myanmar ၏ Membership အစီအစဉ် စတင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကြိုးပမ်းချက်များ မကြာမီ လွှတ်တော်ထဲ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရောက်လာတော့မည်။လွှတ်တော်ထဲမဲခွဲလျှင် အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မှာ မလွဲမသွေပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တော့ အထောက်ပံ့ရနိုင်ပေသည်။ လွန်မင်းမန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၏ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းချက်မှာ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မည်မျှကြာမည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်။.
စစ်ရာဇဝတ်မှုများ တရားဥပဒေအောက်ရောက်ဖို့ မြန်မာကို အချိန်ပေးပါ
လွတ်လပ်သော စုံစမ်းရေးစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က ရခိုင်တွင် အရပ်သားများ လုယက်သတ်ဖြတ်ခံရမှုကို အထောက်အထားများဖြင့်မှတ်တမ်းတင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစုအပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့ရမှုများကို လွတ်လပ်သော စုံစမ်းရေးစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က ပြည့်စုံစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို ယခုအပတ်တွင် သမ္မတထံ တင်ပြလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်သည် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြရသူများနှင့်.
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားတွေကသာ အကြီးအကျယ် ကြီးစိုးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားလုပ်အားအများစုက မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကို အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်မှုတွေက ပိုမိုများလာပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Frontier Myanmar မဂ္ဂဇင်းနဲ့